टिभिएसको बीमा तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न
Monday, 17 Jun, 2019 1:05 PM
२ असार, काठमाडौं । नेपालकालागि टिभिएस टु व्हीलर्सको एक मात्रआधिकारिक वितरक जगदम्बामोटर्स प्रा.लि. देशभर प्रत्येक घरमा टिभिएसबाईक तथा स्कूटरलाई स्थानदिलाउन एक घर एक टिभिएस भन्ने अभियानअन्तर्गत नाटुको (नेपाल अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियन) सहकार्यमा बीमा तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
नाटु र जगदम्बा मोटर्स परिवारको तर्फबाट संयुक्त रुपमा पानसमा बत्ति बालेर कार्यक्रमको औपचारिक रुपमा समुद्घाटन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा टिभिएसको तर्फबाट नाटु जीवनबीमा कोषको लागि रु. ५१,००० आर्थिक सहायता प्रदान गरिने घोषणा पनि गरिएको थियो भने यसका अलावा नाटु मार्फत बिक्री भएका प्रत्येक बाइक तथा स्कूटरबाट रु. २०० उक्त कोषको लागि छुट्याइने जानकारी पनि गराइएको थियो ।
काठमाडौंमा आयोजित प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा दिपक कुमार अग्रवालले प्रकाश पारेका थिए । उनले भने, ‘टिभिएस अहिले नाटु संग निरन्तर सहकार्य गर्न चाहन्छ । प्रविधिले धेरै फड्को मारेको परिवेशमा अहिले धेरै नयाँ टेक्नोलोजीको विकार भएको हुदा मेकानिक्सहरुलाई तालिम दिनु आवश्यक छ । हामीले दस हजार भन्दा बढि मेकानिक्सहरुलाई तालिम प्रदान गरिसकेका छौं । तालिम मात्र होइन हामीले देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य को साथ साथै टिभिएस को डिलर सम्म बन्न सकुन भन्ने उद्देश्य लिएको हो । हामी संग यसको प्रत्यक्ष उदाहरण पनि रहेको छ । “साथ छ हाम्रो”, एक घर एक टिभिएस जस्ता महत्वपूर्ण श्लोगनलाई व्यवहारमा लागु गरिसकेका छौं । मोटर साइकल, स्कुटर र तिनपाङ्गे सवारी साधनमा अहिलेको समयमा चाहिने नयाँ विषेशताहरु समावेश गरेका छौं ।’
केही मेकानिक्सहरुलाई टिभिएसको फ्याक्ट्रीमा तालिमको व्यवस्थादिने बारेमा पनि सोचिरहेको कुरा अग्रवालले जानकारी दिदै भने, ‘टिभिएस एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहो यसको ईतिहास लामो छ । हामीले ग्राहकवर्गहरुलाई निरन्तर गुणस्तरीय सेवादिने कुरामा कुनै पनि सम्झौता गरेको छैन । हामीले एक घर एक रोजगारको पनि अवधारणा निर्माण गरिरहेका छौ । हामीले सधै अटोमोबाइलको क्षेत्रमाकाम गरेका अनुभवी व्यक्तिहरुलाई नै आधिकारीक डिलर दिने गरेका छौं ।’
कार्यक्रममा यस अभियानका ब्रान्ड एम्बेस्डरका रुपमा माधव पाण्डेलाई घोषणा गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा नाटुका विभिन्न पदाधिकारी एवम् ब्रान्ड एम्बेस्डर माधव पाण्डेले समेत आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।